यदि हो भने कसरी फाइदा गर्छ ? - यौन मनोविज्ञान - साप्ताहिक
यदि हो भने कसरी फाइदा गर्छ ?
- करूणा कुँवर, मनोविद्
म ३५ वर्षको भएँ । यो उमेरमा पनि विभिन्न स्वास्थ्य तथा शारीरिक समस्या देखिन थालेको छ । श्रीमतीसँग महिनामा दुई-तीन पटक मात्र यौनसम्बन्ध हुन्छ, किनभने मलाई यौन क्रियाकलापप्रति त्यति चासो लाग्दैन । यौन क्रियाकलापले धेरै किसिमको फाइदा पुर्‍याउँछ र यसले स्वास्थ्यमा सकारात्मक असर गर्छ भन्ने सुनिन्छ, के यो साँचो हो ? यदि हो भने कसरी फाइदा गर्छ ?
कहिलेकाहीं मानिसहरू एउटै कुरामा अति आशक्त हुन्छन् र त्यस्तो किसिमको आशक्तिले नकारात्मक असर पनि पुर्‍याउँछ । मानिसका यस्ता व्यवहारहरूमाथि विभिन्न अध्ययन-अनुसन्धान भएका छन् । यौन क्रियाकलापका फाइदा वा बेफाइदाका सम्बन्धमा धेरै खोजी भएका छन् । ती अनुसन्धानअनुसार यौन क्रियाकलापले शरीर र आत्मा दुवैलाई फाइदा पुर्‍याउँछ । पेनसिल्भेनियाको स्कुल अफ मेडिसिनका चिकित्सक माइकल किरिगलियानोले त यौन क्रियाकलापलाई एक किसिमको शारीरिक व्यायाम भनेका छन् । हप्तामा तीनपटक यौनसम्बन्ध राख्ने हो भने त्यसले झन्डै ७ हजार ५ सय क्यालोरी नष्ट गर्छ जुन ७ हजार ५ माइल हिँडे बराबर हो । यौनसम्बन्धका क्रममा श्वासप्रश्वास तीव्र हुन्छ, जसले शरीरका तन्तुहरूमा अक्सिजनको मात्रा बढाउँछ ।
यौन क्रियाकलापलाई सही ढंगले अघि बढाउँदाका अन्य फाइदा पनि छन् । सिकागो नर्थ वेस्टर्न युनिभर्सिटीका निर्देशक डाक्टर करिन डोनाहेका अनुसार कुनै पनि किसिमको शारीरिक व्यायामले पुरुषमा टेस्टोटेरिन हार्मोन बढाउँछ, यो हार्मोनले पुरुषको हड्डी र मासंपेशी बलियो बनाउँछ । नियमित रूपमा स्वस्थ यौनसम्बन्ध राख्नाले कोलेस्टोरलको मात्रा बिस्तारै कम हुँदै जान्छ । अमेरिकन एसोसियसन अफ सेक्स एजुकेटरका डाक्टर विभरली विपलका अनुसार यौन क्रियाकलाप र अग्र्याज्मका क्रममा निस्कने हार्मोनका कारण मांसपेसी एवं टाउकाको पीडा कम हुन्छ । कुनै औषधिको प्रयोगबिना डीएचईए हार्मोनको विकास हुन्छ । यो हार्मोन शरीरका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यो हार्मोन चरमोत्कर्ष वा स्खलन हुनुभन्दा ठीक अघि निस्कन्छ । यौन क्रियाकलापका क्रममा यो हार्मोन सामान्य अवस्थामा निस्कनेभन्दा ३ देखि ५ प्रतिशत बढीले निस्कन्छ ।
अनुसन्धानकर्ताहरू भन्छन्— ग्रन्थिमा बढ्ने एक प्रकारको तरल पदार्थले प्रोस्टेटको समस्या हुन्छ । उमेर छिप्पिँदै जाने क्रममा धेरै पुरुषमा यो समस्या बढ्दै जान्छ । नियमित स्खलनले यही तरल पदार्थलाई यौन क्रियाकलापका क्रममा बाहिर निकाल्ने काम गर्छ र प्रोस्टेटको समस्या केही कम हुन्छ ।
डोनाहेले यौनसम्पर्कलाई तनाव कम गर्ने प्रभावकारी माध्यम भनेका छन् । यौन क्रियाकलापले दुई जनाबीचको सम्बन्धलाई नजिक बनाउँछ । एक-अर्कालाई स्पर्श गर्दा ओक्सिटक्सिन हार्मोन बढ्छ । उक्त हार्मोनलाई दुई जनालाई नजिक ल्याउने हार्मोन पनि भनिन्छ । ओक्सिटक्सिन हार्मोनलाई यौन इच्छा बढाउने हार्मोन पनि मानिन्छ, जुन हार्मोन नियमित रूपमा निस्कँदा यौनसम्बन्ध स्वस्थ रूपमा अघि बढ्छ । नियमित यौनसम्बन्धले महिलामा इस्ट्रजिन हार्मोन बढाउँछ । यसले महिलाको मुटुलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ र योनिका तन्तुहरूलाई नरम बनाउने काम गर्छ । यौन क्रियाकलापले स्वास्थ्य र शरीरमा देखिने विभिन्न प्रकारका असन्तुलनलाई समेत कम गर्छ । धेरै मानिसको जन्मजात स्वाभाव मीठो चीज धेरै खाने खालको हुन्छ र धेरै समस्या यही स्वाभावले निम्त्याउँछ । यौन क्रियाकलाप पनि त्यस्तै हो । यो अनुशासित, मर्यादित, नियमित र एउटा सीमाभित्र हुनुपर्छ । यसो भए शरीरलाई पर्याप्त फाइदा हुन सक्छ । अनुशासन र सीमाबाहिर हुने गतिविधिबाट भने रोग लाग्ने, समस्यामा वा तनावमा परिने खतरा हुन्छ ।
सम्बन्धमा सुखानुभूतिका लागि भाद्र १९, २०७६
यौन : नसुनिएका तथ्य भाद्र १०, २०७६